न बैठक न राहत !::Online News Portal from State No. 4
न बैठक न राहत !
बागलुङ, २२ भदौ – दुई साता पहिले बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–३ की पुर्ण कुमारी पुनको गोठमा आगलागी भयो । आगलागीबाट भैंसी र गोरु पनि जले । गोठै मासिएको पिडाले छट्पटाएकी पुन जलेको गोठको पुननिर्माण गर्न राहतको खोजीमा हिँडिन् । सामान्य परिवारकी उनलाई कुनै सानो सहायताले मात्रै पनि ठुलो राहत हुन्थ्यो । निसीखोला गाउँपालिकाले विपद्का बेला सघाउन कोष बनाएर राहत रकम दिने गरेको छ । ‘गाउँपालिकाले दैविक प्रकोपबाट क्षति हुनेहरुको राहतको लागि कार्यबिधि बनाएको छ ।’ वडाध्यक्ष जुनबिक्रम शाहीले सुनाएको यहीँ कुरा सुनेर गाउँपालिकामा राहतका लागि पुगेकी पुन रित्तो हात फर्किन् । गाउँपालिकाले विपद्का बेला सघाउने भनेर बनाएको कोषको रकम निकासा गर्ने अधिकारी गाउँपालिकामा छैनन् । तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम प्रसाद आचार्य समायोजनसँगै गत असार २९ गते अख्तियारमा सरुवा भएसँगै निसीखोलाका अधिकार सम्पन्न अधिकारीबिहिन छ ।
नियमीत पञ्जिकरणका कामका लागि नायव सुव्वा पुरुषोत्तम गौतमलाई निमित्तको जिम्मेबारी दिईए पनि आवश्यक परेका बेला बैठक चलाउने वा आर्थिक कारोवार गर्ने अधिकार उनलाई छैन । रामप्रसादको सरुवासँगै निसीखोलामा सबै काममा समस्या देखिन थालेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गराएको मन्त्रालयले अरु कसैलाई जिम्मेबारी दिएर नपठाउँदा समस्या भैरहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष शोभा कार्कीले बताईन् । निमित्त अधिकार पाएका गौतमको समेत काठेखोला गाउँपालिकामा सरुवा भएको छ । कर्मचारी समायोजनमा उनको दरबन्दी काठेखोला कायम गरिएको भएपनि गाउँपालिका नै खाली हुने अवस्था आएकाले रोकेर राखेको कार्कीले बताईन् । ‘कर्मचारी चाहियो भनेर कयौं पटक अध्यक्ष सम्बन्धित निकायमा पुग्नुभएको छ’ कार्कीले भनिन् ‘अहिलेसम्म कसैलाई तोकेको जानकारी छैन् ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्रै होईन गाउँपालिकामा अन्य तहका कर्मचारीको अभाव छ । ७ वडा रहेको गाउँपालिमा कार्यपालिकाको कार्यालय, शिक्षा, पशु, कृषि र वडामा समेत गरेर ९ जना कर्मचारीले मात्रै काम गरिरहेका छन् । सामान्यतया २५ हजारसम्म जनसंख्या रहेको गाउँपालिकामा वडा कार्यालयका कर्मचारीबाहेक १७ जनाको दरबन्दी हुन्छ । वडा कार्यालयका एक जना प्राविधिक र एक जना खरिदार वा नायव सुव्वा रहने प्राव्धान छ ।
‘३२ जनाको दरबन्दी रहेको गाउँपालिकामा ९ जनाले काम गर्दै हुनुहुन्छ, काम चलाउन निकै कठिन भयो’ वडा नं ३ का अध्यक्ष जुनबिक्रम शाहीले भने ‘योजनाका कामको कुरै छोड्नुस् विपद्मा राहत दिन समेत सकिएको छैन् ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएकै कारण गाउँपालिका अन्र्तगतका कार्यालयका कर्मचारी तथा विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता रोकिएको छ । ‘हामीलले कार्यालयका काम मात्रै गर्ने हो’ निमित्त प्रमुख पुरुषोत्तम गौतमले भने ‘तलब भत्ता समेत खुवाउन पाईएन् ।’ निसीखोलामा लेखा शाखाका प्रमुख समेत छैनन् । १ जना सहायक लेखापालले काजमा बसेर काम गरिरहेको शाहीले जानकारी दिए । स्वास्थ्य शाखामा १ जना, कृषि तथा पशु प्राविधिक करारका २ जना, वडा सचिव २ जना, लेखामा एक जना, प्राविधिक २ जना र निमित्त प्रमुख प्राशासकीय एक जनाले मात्रै काम गर्दै आएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएकै कारण दुई महिनादेखि गाउँ कार्यपालिकाको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । ‘कानुनमा बैठकको सचिव स्वत प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था रहेछ’ शाहीले भने ‘सचिव बिना कसरी बैठक बस्नु ।’ फुर्सदको समय भएकाले यतिबेला कार्यपालिकाले योजना तथा प्राशसनिक कामका लागि पर्याप्त छलफल गर्न पाईने भएपनि त्यो अवस्था नरहेको उनले बताए । अहिले अनौपचारीक छलफल बाहेक गाउँपालिकाको औपचारीक बैठक बसेको छैन् । कर्मचारी समायोजनका बेला निसीखोला गाउँपालिका रोज्ने कर्मचारी नै नभएकाले समस्या आएको वडा नं ४ का वडाध्यक्ष टिकानिधि पौडेलले बताए ।